वृहत विज्ञान प्रर्दशनी र ४०औँ वार्षिकोत्सवको अन्तिम तयारीमा छौँ :अर्जुन कुमार बुढाथोकी | पथरी अनलाइन | मोफसलको खबर
वृहत विज्ञान प्रर्दशनी र ४०औँ वार्षिकोत्सवको अन्तिम तयारीमा छौँ :अर्जुन कुमार बुढाथोकी
विवेक न्यौपाने १९ फाल्गुन २०७६, सोमबार
मोरङको पथरी शनिश्चरे १ मा स्थापित पञ्चायत माध्यमिक विद्यालयले फागुन २१ गते गर्न लागेको ४० औँ वार्षिक उत्सव तथा वृहत विज्ञान प्रर्दशनीको तयारी तिब्र बनाएको छ। सोही तयारीको प्रसंगमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक अर्जुन कुमार बुढाथोकीसँग गरीएको कुराकानी:
हाम्रो कुराकानीमा यहाँलाई स्वागत छ।
आराम नै हो तर कार्यक्रमको तयारीको व्यस्तता भने निकै रहेको छ।
कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराइदिनुस् न।
विद्यालयको ४० औँ वार्षिकोत्सवको यही फागुन २१ गते गदैछौँ, कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न गर्ने योजना सहित सम्पूर्ण टिम नै लागी परेका छौँ।
के कस्ता कार्यक्रमको योजना बनाउनु भएको छ?
वार्षिकोत्सवको अवसरमा अभिभावक भेलाको समेत आयोजना गदैछौँ। सोही अवसरमा विद्यालयको वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन प्रस्तुत र आगामी वर्षको कार्यक्रम तथा योजना समेत प्रस्तुत हुनेछ।
अनि स्वास्थ्य परीक्षणको समेत आयोजना हुने चर्चा छ, यसबारे बताइदिनु न।
हो, स्वास्थ्य परीक्षणको समेत आयोजना गर्दैछौ। वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवसको अवसरमा आउनु हुने सम्पूर्ण अभिभावकहरुलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य परीक्षणको आयोजना गर्दैछौँ। कार्यक्रममा उपस्थित हुने सबैले यसबाट लाभ लिन सक्नु हुनेछ। र अर्को कुरा यो पूर्ण रुपमा निशुल्क रहनेछ।
यसका अलावा अन्य कस्ता कार्यक्रमहरु रहनेछन्?
कार्यक्रमहरु धेैरै छन्, विद्यालयमा लामो समय अध्यापन गराएर अवकास पाउनु भएका शिक्षकहरुको सम्मान तथा विदाईको कार्यक्रम समेत राखेका छौँ। साथै विद्यालयमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याउनु हुने शिक्षकहरुलाई समेत सम्मान गर्ने योजना बनाएका छौ।
अनि कार्यक्रममा पूर्व विद्यार्थीहरुलाई समेट्ने कुनै योजना छन् कि?
पक्कै पनि, पूर्व विद्यार्थीहरु विद्यालयका गहना हुन्। हाम्रा पूर्व विद्यार्थीहरु धेरै जना राष्ट्रिय स्तरमा नै परीचित भैसक्नु भएको छ। राष्ट्रिय स्तरमा ख्याती कमाउनु भएका हाम्रा पूर्व विद्यार्थीहरुलाई सम्मान गर्ने योजना बनाएका छौँ।
हाम्रा पूर्व विद्यार्थीहरु नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय अध्यक्ष, मिस पूर्वाञ्चल, राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी लगायतको क्षेत्रमा सफल भैसक्नु भएको छ।
छन्। विभिन्न समयमा आयोजना भएका विभिन्न खेलकुद र प्रतिस्पर्धाका विजयी खेलाडी विद्यार्थी, शैक्षिक गतिविधिमा उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई समेत पुरस्कृत गर्ने योजना बनाएका छौँ।
यो सँगै अक्षकोषदाताहरु मार्फत वितरण गरीने स्कूल ब्याग, स्टेसनरी लगायतका सामाग्री वितरण पनि सोही दिन गर्ने योजना छ।
यी कार्यक्रमका अलावा मुख्य आर्कषणको रुपमा विशेष केही ?
सबै कार्यक्रम नै विशेष छन् त्यसमध्ये पनि वृहत विज्ञान प्रर्दशनी मुख्य आकर्षण रहनेछ।
कार्यक्रमको उद्धाटन देखी ३ दिने वृहत विज्ञान प्रर्दशनी समेत गर्दैछौँ। कार्यक्रमको उद्धाटन नै फरक ढङ्गले गर्ने योजना राखेका छौँ जुन मुख्य आर्कषण हुने हाम्रो विश्वास छ।
फरक ढङ्गले कार्यक्रमको उद्धाटन भन्नाले?
कार्यक्रमको उद्घाटन विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले स्थानिय स्रोत साधनको प्रयोग गरि बनाएको रोवर्टे प्रयोग गरि रिवन काट्ने र ड्रोनले पुष्प वर्षा गर्दै उद्घाटन गरिने योजना छ। उद्घाटन समारोहमा प्रदेश १ का सामाजिक विकाश मन्त्री जिवन घिमिरेको प्रमुख आतिथ्यता रहनेछ।
विज्ञान प्रर्दशनीमा अन्य के के अवलोकन गर्न पाइन्छ?
३ दिने बृहत विज्ञान प्रर्दशनीमा ४६ वटा स्टलहरु रहने छ। जसमा अटो स्ट्रिट लाईट, स्र्माट डस्टविन, अब्स्ट्याकल अभोइडिङ रोवर्ट, रेन अर्लट सिस्टम, स्र्माट फोन कन्टा«ेल रोवर्ट, स्र्माट चेयर, लन्डन ब्रिज, पञ्चायत माविको मोडल, हाईडो«फोनिक्स, वोटानिकल गार्डेन, ग्रिन हाउस लगायत वडा नम्वर १ को मोडल को प्रर्दशनी समेत गरिने छ।
यी सबै स्टल पञ्चायत मावीको मात्र रहन्छ कि अन्य विद्यालयलाई पनि समेट्ने योजना छ?
हैन, केहि स्टल अन्य विद्यालयका लागी समेत छुट्याएका छौँ। विभिन्न विद्यालयलाई पत्राचार समेत गरीसकेका छौँ। इच्छुक विद्यालयले विज्ञानसँग सम्वन्धित सामाग्री प्रर्दशनीमा राख्न सक्नेछ।
विद्यालयका लागि ३६ वटा प्रर्दशनी स्टल र बाह्य सहभागि संस्थाका लागि करीव १० वटा स्टल रहने छ।
विज्ञान प्रर्दशनीमा कति जति विद्यार्थीले अवलोकन गर्ने अनुुमान र लक्ष्य लिनु भएको छ?
अब यति नै भन्ने भन्दा पनि १ नम्वर प्रदेशका विज्ञान संकाय संचालन गर्ने सवै विद्यालयहरुको सहभागिता रहने छ। यसका साथै नगरका सम्पूर्ण विद्यालयको समेत सहभागीता हुने भएकाले ३ दिनको अवधीमा २० हजार वढि विद्यार्थीले प्रर्शशनीको अवलोकन गर्ने अनुमान गरेका छौँ।
कुराकानीको अन्त्यमा के भन्न चाहानुहुन्छ?
प्रदेश नम्वर १ कै विज्ञान संकायमा नमुना विद्यालयको रुपमा रहेको विद्यालय, यस पञ्चायत मावीले फागुन २१ देखि २३ गते सम्म बृहत विज्ञान प्रर्दशनीको साथमा ४० औँ वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवसको आयोजना गर्दैछौँ। विद्यालयमा अध्ययनरत विज्ञान संकाय र प्राविधिक तर्फ गरेर ५०० भन्दा बढि विद्यार्थीहरुले तयार पारेका विभिन्न विज्ञानका सामाग्रीहरुको स्टल राखेर प्रर्दशनी गरिदैछ। विद्यार्थीहरुले सिकेको सैद्धान्तिक शिक्षालाई बृहत विज्ञान प्रर्दशनी मार्फत व्यावहारीक रुपमा प्रर्दशनमा ल्याउने उद्ेश्यका साथ कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागिएको छ तसर्थ पायक पर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक लगायतमा उपस्थितिका लागी अन्ुरोध गर्छु। कार्यक्रममा सहभागी भएर विद्यार्थीहरुको हौसला बढाएर कार्यक्रमको समेत शोभा बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्छु।